Izitayela ze-stylish Autumn-Winter 2016-2017 - amathiphu wezintandokazi zemfashini (isithombe)
Izitayela zezinwele 2016
Ukunganaki nokulula - ukuthi ngukuphi okungaqondile ukuthi ungayichaza izitayela ezisemqoka zezinwele zezintambo ezifashisayo ze-Autumn-Winter season 2016-2016. Kulo mkhuba, ubuningi bomvelo nemvelo, yingakho abaklami abaningi basebenzise izinhlobonhlobo ezilula zazo zonke izinwele zabo ezizithandayo zemiboniso yabo: amabhande, amaqoqo, ama-curls nemisindo.
Yiziphi izinwele zezinwele ezisezingeni eliphezulu kakhulu ekwindla nasebusika 2016-2016
Uma ubuza, yisiphi isikhwama sezinwele esizoba yisimangalo kunazo zonke esikhathini esizayo sekwindla-ebusika, khona-ke sizokujabulisa, uthi uzoba yisigaba. Imfucumfucu engenandaba nokungabonakali ingabonwa emibonisweni yezindlu zonke ezihamba phambili, kuhlanganise neDolce & Gabbana, Lanvin, Michael Kors, Prada, Donna Karan. Okuthandwa kakhulu kuleli hlobo lijabulela ubhontshisi obushelelezi, kodwa ukuhluka kwekwindla nobusika kuyoba okuphambene nakho ngokuphelele. Ikhumbuza i-hairdress ye "ballerina eholidini" futhi kufanele inikeze umbono wokuthi wakhile wona amaminithi amathathu ngaphambi kokuphuma. Kuyafaneleka ngalolu khetho, njenge-styling yansuku zonke, nangokuhlwa kusihlwa. Futhi uma usongeza ibhola eliphansi ngenxenye eqondile phakathi, besekanye bese usebenzisa izintambo ezimbili eziyinhloko zonyaka ozayo.
Okunye okuthandwa yi-retro-stacks kusukela eminyakeni engamashumi ayisithupha: ukuqala kokuvolontiya ngemuva kwekhanda, pixy, babette. Ngezandla ezilula zikaPhillip Lim, ikhanda lezinwele ezimanzi nalo lizofaneleka.
Izitayela zezinwele, i-Autumn-Winter 2016-2016 - izitayela zamanje kakhulu
Ikhanda lezinwele labesifazane elincane kunazo zonke futhi elisezingeni eliphezulu 2016-2016 lizoba amakolintshi angenandaba. Empeleni, kunzima ukubiza ama-locks, "kunokuphumula" kwezingqimba. Ukuze ufeze lokhu, kufanele udinga izinwele, bese uhlala isikhathi eside ukuzihlanganisa, ngakho-ke kukhona ukukhanya okuncane kwamagagasi. Noma sebenzisa ama-curl ngosuku ngaphambi komcimbi ozayo, khona-ke ama-curls ezonwebekayo azoba nesikhathi sokulahlekelwa ukuma kwawo.
Ama-braids yizinwele zezimfashini ezisezingeni eliphezulu kakhulu ekwindla ka-2016. Umehluko omkhulu phakathi kwezingulube ze-pigtails zalesi sizini ukunganaki ngamabomu. Manje ngeke umangale ukuvula amahle avulekile, aphinde ashintshwe ngamasongo angemuva. Imibukiso ye-Givenchy, i-Dolce & Gabanna, i-Etro, i-Nicole Miller enezibonelo ezinama-pigtails amancane "amaphayona", okukhumbuza imizamo yezingane yokubopha ubuchopho ngokwabo.
I-ponytail ephakeme iphinde iphakathi kwezinwele zezinwele zangempela 2016-2016. Lokhu cishe kuwukuphela kwendlela yokugqoka ephathekayo kule nkathi, okufanele ihambe kahle futhi ihlelekile. Okuwukuphela kwenguqulo yomsila wehhashi ovela ku-Chanel, owawuhlotshaniswa nge-pigtails yokufakelwa kanye nempaphe.
Uma ufuna ukudala i-hairstyle yezintambo kunazo zonke, khona-ke udinga ukuhlanganisa izakhi ezihlukahlukene zokuthambekela kulo. Isibonelo, ukuhlukanisa izinwele ngokulinganayo phakathi nendawo nokubopha ubhiya obungenandaba, okuzoba yisisekelo sensika encane.
Umlando wesifazane wesifazane ekuqaleni kwekhulu lama-20
I-shades ye-Top-5 ye-trends ye-wardrobe ehlobo
Izigqoko zasebusika eziqanjiwe zabesifazane
Endleleni: izithombe ezingu-TOP-3 zokuphumula kwe-suburban
Ugogo ugogo ngenyama
Izandla ezihlokweni ze- "Autumn" ngezandla zabo esikoleni nasenkulisa. Master amakilasi yezandla zempahla yemvelo kanye plasticine
Isobho sezinyosi zaseShayina nge-noodle
Izinkinga zokulungiswa kwezingane ukuya enkulisa
Ungasigeza kanjani ijaji elingaphansi kumshini wokubhala futhi ngesandla?
Indlela yokususa i-cellulite kusuka ku-lyashek nasezintweni ekhaya
Ukunakekela umyeni: kungenzeka yini ukubuyela futhi kanjani?
Ama-mushroom e-Honey eKorea
Borsch ngeklabishi fresh
Izinkanyezi ezingu-7 zokubonisa ibhizinisi ezingaba othisha bakho
UTurur Batrutdinov wabiza ama-gay amabili adumile aseRussia
Indlela yokugcina izinwele zakho zihlanzekile isikhathi eside
UKsenia Sobchak "wahamba" ku-Olga Buzova ku-Instagram yakhe